Madaxweyne Shariifka DKMG ah oo Booqasho ku tagay Tiyaatarka Muqdisho – SBC
Madaxweyne Shariifka DKMG ah oo Booqasho ku tagay Tiyaatarka Muqdisho
Posted by Webmaster on April 5, 2012 Comments
Madaxweynaha Dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo xubno ka tirsan Labada gole ee Baarlamanka , Xukuumada iyo Laamaha Amaanka DKMG ah ayaa booqasho ku tagay Tiyaatarka magaalada Muqdisho halkaasi oo uu shalay ka dhacay qarax.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa soo indha indheeyay goobihii shalay qaraxa uu ka dhacay Waxaana isagoo halkaasi saxaafada kula hadlayay uu sheegay in dowlada KMG ah ay ka go’antahay sidii ay wax uga qaban laheyn arimaha Amaanka, iyadoona uu tilmaamay in dowlada ay gudi u saartay Falkan shalay dhacay kaasi oo soo xaqiijin doona sida ay wax u dheceen iyo weliba howlo kale oo ay u xilsaaranyihiin.
Waxa uu Madaxweyne Shariif Difaacay ciidamada DKMG ah oo uu sheegay in aanay mudneyn in lagu eedeeyo falkii shalay dhacay isagoo soo qaatay in qaladaadka ceynkaas ah ay mararka qaar dhacaan balse ay mudantahay in waxlaga barto oo aanay soo noqon.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale halkaasi ugaga diray tacsi Umada Soomaaliyeed iyo dhamaan eheladii iyo Qaraabadii ay ka bexeen dadkii halkaasi shalay ku geeriyooday, inta dhaawaca ahna uu ugu duceeyay Caafimaad.
Dhageyso Codka Madaxweynaha oo Aribo badan taabanaya .Madaxweyne Shariif
C/khaddar Maxamed Siraad
reer burtinle says:
waxan u fahmay waxa kale oo ay uxilsaranyihin in ay ababulan midkale .waxana ushegaya umada somaliyed in sharif iyo tarsan ka danbeyen qaraxas.cadayna waxaa kuugu filan maqnanshaha 2doda
KU.Jaalle Reer Buurtinle.
Beenloow baad tahay ku oran mahayo,laakiin waxaad ka markhaati furtay wax adan waxba ka ogeeyn.Sida an uga jeedo qoraalkaaga wax weeyn ma ogid.Saas darteed in aad tiraahdo anigaa ogsoon oo qaraxii daraad waxaa soo abaabulay Shariif iyo Tarzan waa dambi ad u bareedhay.Shaki kuma jiro n aadan waxba kala socon waxa ad sheegtay.Mala awaalkuna waxuu ka mid yahay dambiyada khatarda ah ee Allaah (swt) weydiiso dambi dhaaf.
bashka xarash says:
waa yaab horta inta dhimatey allaha u naxariisto tan horta waxaa isweydiinleh waxaan maqli jiray wariye la yiraahdo bbc haka maqnaan ahmed siciid ciga baa la yiraahdaa waxaa tarsan xamar looga yaqaan haka maqnaa hadii raashin laqeybinayo hadii la qudbeynayo hadhii meel lawereero hadii guri dowlada lagu wareejinayo iyo hadii meel laxaaqayo waa layaabey ee maxaan isaga shariifka abgaalka maxey u imaanwaayeen waa su aalweyn hala baaro waxaa loo danlahaa waa c/wali ahmed gaas caqli ma ahan meeley joogan amison police iyi melatari baa lasoo gudbey timir laf baa ku jirtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa